Kuratidza zvinyorwa neelebheri Sychrov
Sychrov Castle iri mumusha wezita rimwechete muRiberec Region, 16 kumaodzanyemba kweRiberec ne6 km nechekumadokero kweT turnov. Ndiyo nzvimbo yehurumende yakazarurirwa kuvanhu kubvira 1950; hurumende yayo inopiwa neNational Heritage Institute. Iyo chateau yakaoma muenzaniso wakasiyana weNeo-Gothic aristocratic kugara kwehafu yechipiri ye19. zana remakore. Mukuwedzera kune chateau chivako nemidziyo yayo yepakutanga kune chateau grounds, panewo nzvimbo yakakura yekateti park. Nhare iyi yakange iri chimiro chetsika chizvarwa kubvira 1995.
Pakutanga inononoka Gothic nhare yakamira pane saiti yanhasi chateau, yakaparadzwa munguva ye Makumi Matatu Ehondo. Pakati pa 1690 na 1693, varidzi veiyo Sychrov Lamott yeFrintrop vakavaka mbiri-Baroque chateau munzvimbo yayo. Muna 1820, mhuri yemuchinda weFrance Rohan akatenga chateau muSychrov uye Sychrov yakava imwe yenzvimbo dzekugara. Nekudaro, sezvo yekare baroque chateau isina kuzadzisa zvaRohans 'zvekumiririra uye kugara zvakanaka, Muchinda Karel Alain Gabriel Rohan akaita kuti iwedzerwe mumaitiro e20s…